साग सकियो कुन देशले कति पदक जिते ? – KhabarKhurak
साग सकियो कुन देशले कति पदक जिते ?
काठमाडौँ, २५ मंसिर । १० दिन सम्म चलेको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मंगलबार समापन भएको छ । ‍१३औँ संस्करणमा नेपालले ऐतिहासिक नतिजा निकाल्दै ५१ वटा स्वर्ण जित्न सफल भएको छ । यसअघिका सागमा नेपालले यतिको संख्यामा स्वर्ण जितेको थिएन । १३औँ सागमा पहिलो पटक २७ वटा खेल समावेश भएका थिए । आयोजक नेपालले सबै खेलहरुमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।भारतले २४ वटा खेलमा मात्रै सहभागिता जनाएको थियो।
गौरिका सिंहले एउटै संस्करणमा धेरै वटा स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्दै कीर्तिमान राखिन्। १३औँ सागमा गौरिकाले ४ स्वर्ण र २/२वटा रजत र कांस्य जितिन्। नेपालले सबैभन्दा बढी स्वर्ण तेक्वान्दोमा जित्यो। तेक्वान्दोमा १२ वटा स्वर्ण र जुडोमा १० वटा स्वर्ण जितेको छ। यस्तै,नेपालले ६० रजत र ९६ कांस्य गरी कूल २ सय ६ वटा पदक जित्यो।
भारतले १७४ वटा स्वर्ण, ९३ रजत र ४५ कांस्य सहित कुल ३१२ वटा पदक जित्यो। श्रीलंकाले ४० स्वर्ण, ८३ रजत र १२८ वटा कांस्यसहित २५१ वटा पदक जित्यो। पाकिस्तानले ३१ स्वर्ण, ४१ रजत र ५९ वटा कांस्य, बंगलादेशले १९ स्वर्ण, ३२ रजत र ८७ कांस्य, माल्दिभ्सले १ स्वर्ण र ४ वटा कांस्य जित्यो ।
भुटानले ७ रजत र १३ वटा कांस्य जित्यो। १३ औँ सागमा सबैभन्दा बढी पदक भारतले जित्यो। भारतले ३१२ वटा पदक जित्यो। यस्तै, श्रीलंकाले २५१, नेपालले २०६, बंगलादेशले १३८, पाकिस्तानले १३१, भुटानले २० र माल्दिभ्सले ५ वटा पदक जित्यो। १४औँ साग पाकिस्तानमा हुनेछ ।
थप ४६४ जनामा कोरोना पुष्टिः संक्रमित संख्या २२ हजार २१४ पुग्यो
कोरोना भाइरसबारे स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)
प्रेममा धोका पाए पछि प्रेमिकाले काटि दिइन् आफ्नै प्रेमीको यौनाङ्ग
बाग्लुङको बडिगाडमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न
बाग्लुङको तमानखोला गाउपालीकामा बिकास भित्रदै
कोरोना संक्रमणबाट पाटन अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु Friday, August 7, 2020
भारतमा तिब्र फैलिदै कोरोनाः संक्रमित संख्या २० लाख नाघ्याे, एकै दिन ६२ हजारलाई पुष्टि Friday, August 7, 2020